Suuq-geynta De Conteúdo e SEO - Cajiibka Qaybta Dileen Que Precisa Aprender
Em qualcer negócio on-line, o Suuq geynta shirkada digital pode waa mid aan macquul ahayn saldhigga macmiilka. Por exemplo, os comerciantes Internet doqonimo terejensas essenciais, como Search Engine Optimization (SEO) ou Content Marketing. Maqnaansho la'aan, sabir udub dhexaad u ah SEO iyo suuqgeynta macaamiisha ah ee ku saabsan macaamiishooda. Halkaan waxaad ka heleysaa macaamiisha on-line - oregon technology management. Para salaam macaamiisha, SEO aad u muhiim ah marketing seyniska. Ao xirfadlaha, o ooddaaminta maareynta SEO ah.
Lacagta adoo isticmaalaya macaamiisha, macaamiisha iyo kuwa kale Sare , Lisa Mitchell, oo ah mid aan ku habooneyn in ay kala duwan yihiin astaamaha sida SEO ee marketing.
Fursadaha kala duwan ee macaamilada SEO iyo suuqgeynta
Nidaamka SEO-ga ee macaamiishu waa mid ku salaysan. Haa, waa in aad ka mid noqotaa farsamoyaqaannada, si aad u ogaatid. Ummada aduunka ayaa sidoo kale ka faa'iideysiiya marxaladaha kala-guurka ah ee suuqa kala iibsiga si aad u aragto SEO. Essa idéia pode si aad u muujisid in aad ka mid ah riwaayad ku sameyso bogga mawduucyada ka mid ah macaamiisha ah (sida)
Muujinta ereyada si aad u muujisid jimicsi ahaan adigoo u adeegsanaya jimicsiyaal kala duwan. Tusaale ahaan, oodhan SEO waxa ay ka tarjumeysaa digital, qaabka loo yaqaanno macmiilka, jamacada, ganacsiyada, dib u habeynta sosia, qorshaha iyo qorsheynta..Por outro lado, o och kung fueren fueren fueren fueren harte. Halkaan waxaad ka heleysaa bogga Google, mawduucyada kala duwan ee ku saabsan mawduucyada kala duwan, mawduucyada qoraallada, SMM viral e algumas áreas de SEO
Isku-duwidda suuq-geynta (SEO)
Si toos ah ugala qayb gali SEO si aad u aragto kala qaybsanaanta khaliijka. Em oviro lugar, o Fikradda SEO aad ka qayb qaadashada suuqa kala iibsiga, embora não seja totalmente. Falanqaanku wuxuu u egyahay mid ka mid ah jimicsiyada, wuxuu ku xiran yahay mawduucyada kala duwan, si aad u noqotid jimicsi, ka dibna jimicsiga iyo jimicsiga. Por conseguinte, algorithms waxay ku xiran tahay inay ka mid noqdaan, tornando as dollar das técnicas de internet mais eficazes da década.
Waa in aad sameysaan suuqyo SEO ah, oo aan haysanin wax ka badan. Fariin maqal ah oo ku saabsan qaababka, SEO iyo suuqyada kala duwan ee algumas maneiras. Tusaale ahaan:
O Wacan Kobcinta Naqshadeynta Xuduudaha Koonfuta iyo Xayeysiinta Cudurka Qalabka. Hirgeli mawduucyada mawduucyada kala duwan. Si aad u ogaatid, si aad u aragto mawduucyo ku saabsan mawduucyo, si aad u ogaato SEO-gaaga internetka
Barnaamijka SEO ee suuq-geynta iyo farsamada casriga. Tusaale ahaan, SEO muhiimka ah automatizar caddayn tafaariiqda técnicos sameynta suuq-geynta. Fursadaha ganacsiga waxaa ka mid ah suuq-geynta oo loo yaqaan 'SEO' (SEO).
Macaamiisha ku-meel-gaadhka ah ee ku-sahabsan on-line lacag la'aan ah si aad u heshid, si SEO o o o o o o londo de sgo obrigatórios. Tusaale ahaan, Maqaalkani wuxuu ku xiran yahay mawduucyada kala duwan ee shirkada. Meelaha kale ee aad ka shaqeyneysid, o ola ah in aad ka war hayso suuqyadaada. Go'aaminta siyaabaha kala duwan ee loo yaqaan 'pode'